शहरवासीलाई परेवाको पिरलो
समाज महेश्वर आचार्य
दुःख दिन थालेपछि शहरवासीका लागि परेवा टाउको दुखाइ भएको छ। परेवाको दुःखबाट बच्न उनीहरूले अनेक उपाय अपनाउन थालेका छन्।
घर : जहाँ बस्छ मन!
सामाजिक मान, सफलता, आर्थिक सुनिश्चितता जस्ता पाटोसम्म मिसिएको घरको स्वामित्व लिने कुरा नेपालीका लागि मनसँग जोडिएको छ।
हिंड्नु भनेको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ/गन्तव्यमा पुग्नु मात्र होइन, त्यो यात्राको बीचमा रहेको हावापानी, माटो, जीवजन्तु र मानवबीचको संवाद पनि हो।
जब म अमेरिका आएँ...! म सोच्थेँ, ग्राजुएट-स्कूलका चुनौतीहरू झेल्न म तम्तयार छु। तर, जब म पीएचडी गर्न भनी संयुक्त राज्य अमेरिका आएँ, यस्तो लाग्यो, कसैले मलाई खुशी र सम्पन्न भावमा पौडिरहेको मेरो तलाउबाट फुक्त निकालेर रहस्यमयी, विशाल समुद्रमा झ्वाम्मै खसालिदियो। त्यो समुद्रका हरेक माछा मभन्दा द्रुत गतिमा पौडी खेल्थे, लामो छलाङ मार्थे।
थारुबारे यथार्थ के ? भ्रम के ? ‘थारुहरू जंगलमा बस्छन्, असभ्य छन्’ अहिले पनि काठमाडौं र शहरका मानिस आफूहरूबारे यस्तै धारणा राख्ने गरेकोमा थारु समुदायको चित्त दुखाई छ । वास्तवमा को हुन् त थारु ? थारुबारे यथार्थ के हो ? भ्रम के हो ?
यो मेरो टोपी हो… धोती र टोपीको न तुलना हुनसक्छ न ती एकअर्काका विकल्प हुन्। एउटा कम्मरमुनि लगाइने, लाज ढाक्ने समेत प्रयोजनको बस्त्र हो, अर्को टाउको ढाक्ने। त्यसैले टोपी वा धोती भनेर तिनलाई ‘विरोधी खेमाका’ बनाउन जरूरी छैन।
बीबीसीको 'मास्टर सेफ' प्रतिस्पर्धाको क्वार्टर फाइनलमा नेपालका सन्तोष हस्पिटालिटी सम्बन्धी बीबीसीबाट प्रसारण हुने प्रतिष्ठित टिभी रियालिटी शो ‘मास्टर सेफ प्रोफेशनल यूके प्रतियोगिता २०२०’ को १६ औं संस्करणको प्रतिस्पर्धामा एक जना नेपाली सेफ क्वार्टर फाइनलसम्म पुगेका छन्। नेपाली परिकार लिएर प्रतिस्पर्धामा गएका सन्तोष शाह १६औं संस्करणको क्वार्टर फाइनलमा प्रवेश गरेका हुन्।
१८ बुँदे माग राख्दै सिसडोलबासी आन्दोलित, २० मंसिरसम्म पूरा नभए फोहोर फाल्न नदिने विभिन्न १८ बुँदे माग राख्दै सिसडोलबासी आन्दोलित भएका छन्। शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक लगायत विकास निर्माण गर्नुपर्ने लगायतका १८ बुँदे माग २० मंसिरसम्म पूरा नभए फोहोर फाल्न नदिने भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित भएका हुन्।
निलम राय जो १६ वर्षदेखि हरेक दिन सडक सफा गरिरहेछन् विराटनगर-१०, शान्तिचोकस्थित् धरमबाँध रोडमा हरेक बिहान सडक सफाई गरिरहेका व्यक्तिलाई ‘मर्निङ वाकमा’ हिंड्ने जो कोहीले अभिवादन गर्छन्। १६ वर्षदेखि नियमित सडक सफाई गर्दै आएका निलम राय (४७) लाई यही कारणले सम्मान स्वरूप नमस्कार गर्ने र गाली गर्ने पनि छन्।
गर्भवतीका लागि हवाई उद्धार: सेवा छ तर गर्भवती-सुत्केरीको ज्यान गइरहन्छ सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी जिल्लाहरूमा राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम लागू छ। राज्यले खर्च गरेर हवाई उद्धार सेवा पनि उपलब्ध गराइ नै रहेको छ। तर, सुत्केरी हुन नसकेर गर्भवती महिलाको ज्यान जान भने अझै रोकिएको छैन।
काठमाडौंमा खाली हुँदै भाडाका कोठा, तनावमा घरधनीहरू केही महिनासम्म कोठा पाउन मुस्किल पर्ने काठमाडौंमा अहिले भने कोठा भाडामा लगाउन मुस्किल देखिएको छ। कोठा भाडामा बस्न होस् वा व्यापार व्यवसाय गर्न सटर पाउनै मुस्किल हुने काठमाडौंमा अहिले ‘टु लेट’, ‘कोठा, फ्ल्याट खाली छ’ भन्ने सूचनाहरू जताततै देख्न पाइन्छ।
नेपाली वर्षा थापा ‘भोग इटालिया’को आवरणमा
चर्चित फेसन म्यागेजिन ‘भोग इटालिया’ले सेप्टेम्बरको नयाँ अंकको आवरणमा नेपाली सुपरमोडल वर्षा थापालाई समावेश गरेको छ ।
‘टाइम पास’ अर्थात् टिकटक !
भारतमा प्रतिबन्धित र अमेरिकामा प्रतिबन्ध लगाइने घोषणा गरिएको चिनियाँ स्वामित्वको एप टिकटक बन्दाबन्दीमा समय कटाउन रमाइलो गर्ने र व्यवसाय प्रवर्धन गर्ने चर्चित डिजिटल मञ्च बनिरहेको छ।
कोरोना संक्रमित भएर पनि रेडियो चलाइरहेछन् वीरगञ्जका यी सञ्चारकर्मी
७ भदौमा उनीहरूको कोरोना परीक्षणको रिपोर्ट आएपछि अध्यक्ष गोविन्द देवकोटाले रेडियो बन्द गर्न भने। तर पत्रकार शिवनाथ यादवले आफूले समाचार र कार्यक्रम गर्ने भन्दै प्राविधिक साथीहरूलाई समेत अनुरोध गरेर रेडियोमै आइसोलेसनमा बसेर काम गर्ने निर्णय सुनाए।
कोभिड–१९ को मारमा नेपाली पत्रकार, मानसिक र आर्थिक समस्या डरलाग्दो कोरोनाभाइरस संक्रमणको महामारीबीच फिल्डमा खटिएर ‘फ्रन्टलाइन’मा काम गर्नेमध्ये पर्छन्, पत्रकार। जोखिमपूर्ण भूमिकामा काम गरिरहेका तिनै पत्रकारमा महामारी सिर्जित गम्भीर मानसिक र आर्थिक समस्या देखिन थालेको छ।
बिहानैदेखि मदिरा बेच्ने छूट दिएर समृद्धिको नारा ! युरिया, सल्फर, चप्पल, मोजा र अन्नपात कुहाएर बनाइने घरेलु अवैध रक्सीमा रङ घोल्न प्रयोग हुने स्पिरिट र युरिया मल हालिन्छ। यस्तो रक्सीले खासगरी तराईमा वर्षेनि धेरैको ज्यान लिन्छ। तर, अवैध रक्सी उत्पादन रोक्न सरकारको निगरानी नै छैन।
६० वर्ष नाघेका महिलाहरूको व्यवसाय– ‘धौगः बजा’ अर्थात् सस्तो बजार साँघुरा गल्ली। गल्ली पिच्छे मन्दिर र पोखरी। ती मन्दिरका पेटीमा बसेर गफ गरिरहेका ज्येष्ठ नागरिक। ललितपुरको पाटनमा यस्तो दृश्य जहींतहीं देख्न सकिन्छ। तर, पाटनमा नै यस्तो पसल पनि छ, जुन ६० वर्ष उमेर नाघिसकेका महिलाले चलाउँछन्।
थारू पर्व गुरही आयो, तर लेहेंगा बिकेन थारू समुदायका प्रमुख चाडहरू ‘गुरही’ (नागपञ्चमी) देखि माघसम्म पर्छन्। यी चाडमा धेरैजसो थारू महिला र पुरुषले परम्परागत जातीय पोशाक लगाउँछन्। तर, यो वर्ष गुरही आइसक्दा पनि परम्परागत पोशाकको माग बढेको छैन।
अपांगता भएकाहरूको पीडा– यसै त कष्टकर जीवन, महामारीले झनै गाह्रो ! सामान्य अवस्थामा नै संघर्ष गर्दै आएका अपांगता भएकाहरूलाई कोरोनाभाइरसको महामारी र बन्दाबन्दीले आर्थिक कठिनाइ मात्र पारेको छैन, मानसिक समस्या पनि थपेको छ।
खुकुलो बन्दाबन्दीमा यसरी बचौं संक्रमणबाट बन्दाबन्दी खुकुलो भएसँगै सबै जना कामकाजका लागि घर बाहिर निस्कने क्रम बढेको छ। यससँगै संक्रमणको जोखिम बढेकाले सरसफाइ र सुरक्षामा झनै विशेष ध्यान दिनुपर्छ।
कोभिड–१९ महामारीले यसरी बदल्दैछ हाम्रो खानपान कोरोनाभाइरस महामारीले स्वास्थ्य र आहारविहारमा मानव जगत्‌लाई सजग बनाउँदै खानपानसँग जोडिएको जीवनशैलीमा परिवर्तन गरिरहेको अनुसन्धानहरूले देखाएका छन्।